Isikhungo Sokuphepha se-Google - Hlala uphephile ku-inthanethi
Vala idrowa lokuzula
Ukwenza ubuchwepheshe kuwo wonke umuntu kusho ukuvikela wonke umuntu obusebenzisayo.
I-Google yatholwa ngenkolo yokuthi yonke into esiyenzayo kufanele ihloniphe umsebenzisi. Njengoba i-inthanethi ikhula, lokhu kusho ukuthuthukisa njalo ubuchwepheshe bethu bokuphepha namathuluzi obumfihlo ukusiza ukugcina wena nomndeni wakho niphephile ku-inthanethi.
Hlola esikwenzayo ukusiza ukukugcina uphephile
Sikuvikela ku-inthanethi ngokuphepha okuphambili komkhakha.
Yonke into esiyenzayo ivikeleke ngobuchwepheshe obakhelwe ngaphakathi obunamandla obusiza ukuthola nokuvimbela okufana nogaxekile, i-malware, namagciwane ukuthi angafinyeleli kuwe. Futhi sabelana ngalobo buchwepheshe bokuphepha nozakwethu nabaqhudelani bethu ngokunjalo, ukukhulisa amazinga omkhakha asiza wonke umuntu aphephe ku-inthanethi.
Sakha ubumfihlo obusebenzela wonke umuntu.
Idatha yenza amasevisi e-Google abelusizo kakhulu futhi ahlobane, kodwa indlela esisebenzisa ngayo lolu lwazi kuyinketho yomuntu ngamunye olwakho. Sihlala sikwazisa ngokuthi iyiphi idatha esiyiqoqayo, indlela esiyisebenzisa ngayo, nokuthi kungani. Futhi sakha izilawuli zedatha ezinamandla ku-akhawunti yakho ye-Google, ukuze ukwazi ukukhetha izilungiselelo zobumfihlo ezilungele wena.
Sikusiza ukuphatha okukulungele umndeni wakho ku-inthanethi.
Izingane namuhla zikhula ngobuchwepheshe, ngokungafani nezingane zaphambilini. Ngakho-ke sisebenzisana ngqo nosolwazi nabafundisi ukukusiza ukuthi usethe imikhawulo futhi usebenzise ubuchwepheshe ngendlela elungele umndeni wakho.
Inqubomgomo Yemfihlo (ivuleka kuwindi elisha)
Izindaba zokuvikela (ivuleka kuwindi elisha)
Usizo (ivuleka kuwindi elisha)